Nwaada Tsai Ing-wen, onye zọrọọkwa n’okpuru otu Democratic Progressive Party nwetere mmeri kpụọkụ n’ọnụ na ntụli aka e mere n’ọnwa JenuwarJanuarị.
Tsai Ing-wen bụ onye ndu mbụ kpọrọ oku ka e nwee mkparịta ụka ha na Beijing.
Anyị na-anụ na ndị agha gọọmenti mba Irak amalitego ịlụsa ndị otu agha iyi egwu ahụ a na-akpọ ISIL n’aha achafụ ọgụ kpụ ọkụ n’ọnụ.
N’ọnụ mmiri okwu onye Praịm Minista mba ahụ, “Taa, n’ike nke Chineke, anyị na-amalite ọgụ maka iweghara obodo ndị a e nwere n’
Ndị ọrụ nchekwa ekwuola na ha achọpụtago onye bụ nwoke onye otu ISIS ahụ a na-ahụ n’ihe onyonyo ndị otu agha iyi egwu ebe ọ na-afọnye ndị mmadụ mma n’olu. Nwoke ahụ a ma ama dịka Jihadi John, onye na-afụ onwe ya mmanwụ mgbe ọ bụna ọ pụtara n’ihe onyonyo maka igbu mmadụ, egbuona mmadụ ole n’ole ndị nta akụkọ.